मञ्चमा दुर्गानन्दको कथा- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
मञ्चमा दुर्गानन्दको कथा
काठमाडौँ — २०१७ पुस १ गते पहिलो निर्वाचित सरकार र संसद्लाई ‘कु’ गरी राजा महेन्द्रले शाही निरंकुशता सुरु गरे । यसैको विरोधमा जनता संघर्षमा होमिए । २०१८ माघ १ गते जानकी मन्दिरनिर राजा महेन्द्र चढेको जिपमा बम प्रहार भयो ।
सर्वनाम थिएटरमा मञ्चन सुरु भएको ‘काशीदेवी’ मा अभिनय गर्दै सरिता शाह ।
राजालाई केही भएन, जिपको केही भाग क्षतिग्रस्त भयो । बम प्रहारको अभियोगमा दुर्गानन्द झा समातिए । २१ वर्षीय युवक गणतन्त्रका लागि हाँसीहाँसी फाँसीमा चढे । नेपालमा गणतन्त्र आएपछि उनकी श्रीमती पहिलो महिला कानुन राज्यमन्त्री पनि भइन् ।
यही कथाको नाटय रूप ‘काशीदेवी’ मा देख्न सकिन्छ । लेखक नीराजन झा र सरिता शाहको परिकल्पना एवं निर्देशन रहेको मैथिली नाटकको मञ्चन बिहीबारदेखि सर्वनाम थिएटरमा सुरु भएको छ ।
नाटक मञ्चन भइरहँदा हलमा दर्शक भावुक भए । पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि गला अवरुद्ध पारे । नाटक हेरिसकेपछि रुमालले आँसु पुछदै उनले ‘दुर्गानन्द झा प्रजातान्त्रिक योद्धाका साथै सबैको लागि प्रेरणाको स्रोत भएको’ बताए । झाको कथालाई कलाकारहरूले सशक्त अभिनयमार्फत प्रस्तुत गरेर अहिलेको पुस्तालाई देखाएकामा उनले धन्यवादसमेत दिए ।
नाटकले ‘गणतन्त्र त्यसै आएको हैन भन्ने ज्ञान दिएको’ वरिष्ठ नाटककार अशेष मल्लले सुनाए । नाटक हेरिरहँदा बीपी कोइरालाले लेखेको ‘एक रात’ कथाको स्मरण भएको उनले सुनाए । मैथिली लोक नाटय परम्परा ठूलो रहेको प्राज्ञ रमेशरञ्जन झाले जनाए । मैथिली नाटकको सात सय वर्ष अघिदेखि लेख्य रूपमा भेटिएको उनले दाबी गरे । उपत्यकाको नेवार नाटय परम्परामा पनि मैथिली नाटकको प्रभाव रहेको उनले सुनाए ।
‘काशीदेवी’ नाटक सरल तर सशक्त लाग्छ । झन्डै डेढ घण्टा लामो नाटकमा पात्रहरूको बोली, संवाद, अभिनयले दर्शकलाई बाँधिरहन सफल भएको छ । मैथिली भाषा र केही नेपाली भाषामा भए पनि अभिनयबाटै पनि कथावस्तुलाई गहन रूपमा नाटकमा बुझाइएको छ । नाटकको परिवेश, मञ्च प्राकृतिक लाग्छन् । भित्तामा बनाइएका मिथिला चित्र, टुकी, पहिरनले तराईको मिथिला संस्कृति झल्काउँछन् । बीचबीचमा विश्व काफ्लेले गाएको गीत, दिलीप महर्जन र विनोद बञ्जाराको मुरली र तबलाको धूनले दर्शकलाई तराईको मिथिला क्षेत्रमै पुर्‍याइदिन्छ । विषयको गम्भीरतालाई कलाकारहरूले पनि जीवन्त उतार्न सफल भएका छन् । दुर्गानन्द झाकी आमाको भूमिकामा रहेकी सरस्वती अधिकारी रुँदा दर्शक पनि सँगसँगै रुन्छन् । केही दृश्यमा भने दर्शक पेट मिचिमिची हाँस्छन् ।
माघ ६ गतेसम्म मञ्चन हुने नाटकमा उत्पल झा, सरीता शाह, सरस्वती अधिकारी, सुरभि सापकोटा, अर्जुन पौडेल, राज शर्मा, कृष्ण महतो, धु्रवकुमार झा, प्रीति झा, सुलभ पाण्डे र अनिल कुर्मीले अभिनय गरेका छन् । प्रकाश परिचालन प्रकाश खत्री, संगीत परिचालन सरोज खडका र नृत्य निर्देशनको पाटो प्रकाश कार्कीले सम्हालेका छन् ।
प्रकाशित : पुस २९, २०७४ ०७:५७
अंग्रेजी कवितासहित ममता
काठमाडौँ — वरिष्ठ चित्रकार उत्तम नेपाली कुनै बेला कविता लेख्थे । पछि चित्रकारको रूपमा स्थापित बने । उनकै सामीप्यमा हुर्केकी छोरी ममता कर्माचार्य भने कविताबाट बढी प्रभावित भइन् । उनै ममता अंग्रेजी कविता संग्रह ‘प्यास्टोरल प्याङ एट हयाङ्स’ सहित आएकी छन् । हालै राजधानीमा उनले आफ्नो बुबासँगै प्रा.डा. अभि सुवेदी र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विष्णुविभु घिमिरेबाट कृतिको लोकार्पण गराइन् ।
अमेरिका बस्दै आएकी कर्माचार्यले यो कृति ‘अझै दुख्दै छ मन’ कविता संग्रहको अंग्रेजी संस्करण हो । कृतिमाथि टिप्पणी गर्दै समालोचक डा. अभि सुवेदीले ‘ममताका कवितामा गुणात्मकता भेटिने’ दाबी गरे । ‘प्रेमसम्बन्ध र त्यसमा आउने उतारचढावहरूमा उनका सिर्जना केन्द्रित छन्,’ सुवेदीले भने, ‘एउटा व्यक्तिको पर्सनल रिलेसन कसरी युनिभर्सल रिलेसनको रूपमा विकसित हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि ममताका कवितालाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।’ ममताले भने ‘जे जति लेखे पनि मनदेखि खुलेर लेख्ने बानी’ रहेको बताउँदै आफ्ना कविताहरू प्राय: माया, प्रेम र प्रकृतिजन्य अनुभूतिबाट प्रभावित रहेको दाबी गरिन् । डा. नकुल परासरले अंग्रेजी अनुवाद गरेको संग्रहमा ४८ वटा कविता छन् । सन पब्लिकेसनले कृति छापेको हो । ‘नेपाली साहित्यलाई अंग्रेजीमा प्रवद्र्धन गर्न कृतिले सघाउने’ अनुवादक परासरले दाबी गरे ।
प्रकाशित : पुस २९, २०७४ ०७:५६